Vaovao - Ny vidin'ny vy dia mety hametraka avo lenta rehefa miakatra ny tinady
Rehefa miakatra ny vokatra aorian'ny fialantsasatry ny Fetin'ny Lohataona dia miatrika fiakaran'ny vidim-piainana ny orinasan'ny sinoa, miaraka amina entana sasantsasany toy ny rebar mitsambikina 6,62 isan-jato tamin'ny andro fifanakalozana farany talohan'ny Fetin'ny Lohataona ka hatramin'ny andro fiasana fahefatra taorian'ny fialantsasatra, hoy ny indostria vondrona mpikaroka.
Nilaza ny manam-pahaizana fa ny fitohizan'ny asa ataon'i Shina dia mety hampiakatra ny vidin'ny vy mihoatra ny avo indrindra amin'ity taona ity, ny fiandohan'ny drafitra dimy taona faha-14 (2021-25) an'ny firenena.
Ny ho avin'ny vy eto an-toerana dia nahatratra 1180 yuan (182 dolara) taonina ny taonan'ny alatsinainy lasa teo, ary nisondrotra ihany koa ny vidin'ny coking, vy ary ny vidin'ny akora hafa, araka ny Foibem-pikarohana any Beijing Lange Steel. Na dia nidina 2,94 isan-jato aza ny vy tamin'ny talata lasa 1.107 yuan, dia nijanona tamin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa izany.
Mpividy mpamatsy akora betsaka indrindra i Sina, ary ny fanarenana ara-toekarena aorian'ny areti-mandringana dia nalaza kokoa noho ny any amin'ny firenena hafa. Izany dia mitarika amin'ny fiverenan'ny kaomandy ivelany amin'ny varotra any Shina ary noho izany dia mitombo ny fangatahana vy, hoy ny manam-pahaizana, ary afaka mitohy ny fironana.
Ny vy dia mivarotra amin'ny $ 150-160 taonina eo ho eo, ary mety hiakatra mihoatra ny $ 193 amin'ity taona ity, angamba hatramin'ny $ 200, raha mijanona ho matanjaka ny fangatahana, hoy i Ge Xin, mpanadihady zokiolona ao amin'ny Beijing Lange Steel Information Research Center, tamin'ny Global Times amin'ny talata.
Nilaza ny manam-pahaizana fa ny fanombohana ny drafitra dimy taona faha-14 dia hampisondrotra ny toekarena amin'ny ankapobeny, koa hitombo koa ny fangatahana vy.
Ny fandefasana vy taorian'ny fialantsasatra dia natomboka tamin'ny fiandohan'ity taona ity raha oharina tamin'ny tamin'ny taon-dasa, raha ny loharanom-baovao avy amin'ny indostria, ary ny habetsahana ary koa ny vidiny dia avo kokoa.
Noho ny fiakaran'ny vidin'ny vy haingana, misy mpivarotra vy sasany tsy sahy mivarotra na mametra ny varotra amin'izao fotoana izao aza, miaraka amin'ny fanantenana fa mety hiakatra hatrany ny vidiny amin'ny faran'ity taona ity, hoy ny vondrona mpikaroka indostrialy.
Na izany aza, mino ihany koa ny sasany fa ny hetsiky ny tsena ao Shina dia manana andraikitra voafetra ihany amin'ny fampisondrotana ny vidin'ny vy, satria ny firenena dia manana fahefana matanjaka amin'ny fifampiraharahana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
"Ny vy dia oligopoly misy mpitrandraka efatra lehibe - Vale, Rio Tinto, BHP Billiton ary Fortescue Metals Group - izay mitentina 80 isanjaton'ny tsena manerantany. Tamin'ny taon-dasa, ny fiankinan-doha an'i Sina amin'ny akora vy any ivelany dia nahatratra mihoatra ny 80 isan-jato, izay namela an'i China ho amin'ny toerana malemy eo amin'ny sehatry ny varotra varotra, "hoy i Ge.